Banyere P&M → Ọkachamara nke eji kọmputa arụ ọrụ
E guzobere osisi ịkwa akwa P&M na 1995 na Rawa Mazowiecka. Site na 2003. anyị na-enye ọrụ ịkwa akwa, ịcha, ịkpụcha na akara aha. Anyị na-agba ọsọ n'ùkwù na uwe mgbasa ozi.
Anyị nwere a dịgasị iche iche - n'elu 6000 ngwaahịa, uwe ime i mgbasa ozi site n'aka ndị na-emepụta ama ama na ọnụahịa mara mma. Ndị a bụ, ndị ọzọ, sweatshirts, okpu, uwe, uwe elu, ajị anụ, ajị anụ, uwe elu, uwe ọrụ, uwe ndị ọkachamara, uwe ọgwụ, maka ụlọ ahịa oyi na friza, na ọtụtụ akpụkpọ ụkwụ.